जनताका अपेक्षा अनुसार काम गर्दैछौ : नगर प्रमुख हमाल | Kattwal.com
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको डेढ वर्ष पुगिसकेको छ । मुलुक संघिय प्रणालीमा प्रबेश गरेसंगै संबिधानले परिकल्पनना गरेको तीन वटै तहको निर्वाचन अनुसार स्थानयि तह निर्वाचनमा निर्वाचित कंचनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख कर्ण बहादुर हमालले नगर प्रमुखको रुपमा कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन् । यो अवधिसम्ममा नगरपालिकाले के कस्ता विकास निर्माणका कामहरु ग¥यो, हालसम्म भएका प्रगति र आगामी योजनाका विषयमा नगरप्रमुख कर्ण बहादुर हमालसग कट्वाल अनलाईनका लागि टंक कुवरले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
१.कृष्णपुर नगरपालिकाको हालको अवस्था के छ ?
नगरप्रमुख : कृष्णपुर नगरपालिका कञ्चनपुर जिल्लाको क्षेत्रफलको हिसावमा सवैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो । यो नगरपालिकामा सात आठ ओटा मुक्त कमैया बस्ती छन । तीन चार ओटा आश्रृत बस्ती छन् । थुप्रै आदिबासी जनजाति दलितको जनससंख्या भएको नगरपालिका हो । हाम्रो सानो तिनो श्रोत साधनले अहिले विकास निर्माणमा नगरबासीले अपेक्षा गरे अनुसारका कामहरु हुन सकेका छैनन् । नदी कटानले उर्भरायुक्त भूमिहरु बगरमा परिणत भएको अवस्था छ । हामीलाई नदी नियन्त्रणका लागि चुनौती खडा भएको छ । हामीसंग अहिले पनि नगरपालिकाको आफ्नै भवन छैन् । जनताले अपेक्षा गरे अनुसारका सर्वसुलभरुपमा सेवा प्रदायकहरुलाई सेवा दिन सकिरहेका छैनौँ । भर्खर मात्र नगरपालिकाको मुख्य भवन निर्माणाधिन अवस्थामा छ । ५ वटा वडाका वडा कार्यालय भवन निर्माणमा जुटेका छौँ । थुप्रै सडकहरुको कालो पत्रे स्तरोन्नती नदी नियन्त्रणमा जुटेका छौँ । यो नगरपालिका भित्र रहेको २ ओटा क्याम्पसको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्दै छौँ र थुपै्र विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा अघि बढिरहेको अवस्था छ ।
२. स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आईसके पछि जनताका गुनासा, आशा,अपेक्षा के रहेका छन् ?
नगरप्रमुख : खास गरी २० वर्ष पछिको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसंग जनताका धेरै गुनासा,आसा,अपेक्षा त रहने नै भए । त्यसैमा भनिएको छ कि स्थानीय सरकारलाई सिंहदरवारको अधिकार सुम्पेको छ । यस्तो अधिकार सुम्पीसके पछि हामी जनप्रतिनिधिहरु समक्ष जनताको आशा,अपेक्षा प्रवल रहेको छ । जनताले अपेक्षा गरेका सबै विषयबस्तुहरु एकै चोटी सम्पन्न नभएको अवस्था छ । हुन पनि हो जनताले नदी तटबन्धन,गुस्तरीय शिक्षा,बेरोजगारीका लागि रोजगार,विद्युत विस्तार,शुद्ध खानेपानी छिटो भन्दा छिटो हुन पाईदिएको भए हुन्थयो भन्ने कुरा आशा अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । तर यी कुरा एकैचोटी भन्दा पनि विस्तारै हुने कुरा भएकाले केही समस्या उत्पन्न भएको छ । प्रारम्भमा समस्या समाधान गर्न सकिदैन । यो पाँच वर्षभित्र जनताका अत्यावश्यक अपेक्षाहरु पुरा गरेर छोड्ने नै छौँ ।
३. तपाई नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएर आई सकेपछि के कस्ता कामहरु गर्नु भएको छ ?
नगरप्रमुख : म यो नगरपालिकामा निर्वाचित भैसकेपछि जनताका घरदैलोमा गई प्रतिबद्धता गरेका कुराहरु लाई कार्यान्वयनको चरणमा लिने कोसिस गरिरहेको छु । यो नगरपालिकालाई सुन्दर समृद्ध नमुना नगरपालिका बनाउने योजना अनुरुप मैले काम गरिरहेको छु सोही अनुरुप तीन वर्षे,पाँच वर्षे आवधिक योजना ल्याएका छौँ । जस्तै टक्सका कुरा, राजस्व दर घटाउने कुरा उदाहरणका लागि हामी आउनु पूर्व नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र सिफारिस दस्तुर १५० थियो भने हामी आईसके पछि सो दस्तुर घटाएर ११० मा कायम ग¥यौँ । नागरिकता प्रतिलिपी सिफारिस १२५ थियो भने घटाएर १०० बनायौँ । जनतासंग सम्बन्धित कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर मैले काम गरिरहेको छु ।
४. आगामी योजना के छन् ?
नगरप्रमुख : नदी तटबन्द भौतिक पूर्वाधार निर्माण,खेलकुद मैदान निर्माण,कृषकहरुका निमित्त सितभण्डार केन्द्र निर्माण,प्राङ्गारिक मल केन्द्रको विस्तार,थारु संग्राहलयको निर्माण,नगर उद्यान,कृष्णपुर नगरपालिकाको वडा नं. ६ को सामुदायिक वन हाता भित्र चिडिया घर बनाउने आगामी योजना रहेका छन् । सोही अनुरुप कामको थालनी पनि गरिसकेका छौँ ।
५. अन्त्यमा नगरबासीलाई केही भन्नु छ की ?
नगरप्रमुख : अन्तमा सम्पूर्ण नगरबासीलाई म के भन्न चाहन्छु भने सुन्दर नगर बनाउनका लागि सुन्दर योजना ल्याएका छौ“ । ती योजनाहरुमा नगरबासीको साथ र सहयोग को आवश्यकता छ । हामीले गर्ने राम्रो अभियानमा साथ र सहयोग दिनुहोला ।
सुन्दर नगर,सुन्दर सहर निर्माणमा एउटा नगरप्रमुख,वडाअध्यक्ष,सदस्यहरुले गरेर मात्र सम्भव हुदैन त्यसका लागि सम्पूर्ण नगरबासीको हातेमालोको आवश्यकता पर्छ । तपाईहरुका बिचमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता ईमान्दारीतासाथ अक्षरसः कार्यान्वयनमा लग्दै जाने छौँ अहिले जनताको भावना बमोजिम उच्च प्राथमिकताका साथ अत्यावश्य वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ सोही अनुरुप योजनामा बजेट विनियोजन गरेका छौँ । त्यसैले कृष्णपुर नगरपालिकाले गरेका योजनालाई कार्यान्वयनको चरणसम्म पु¥याउन तपाईहरुको पनि आवश्यकता छ । यसका लागि सम्पूर्ण नगरबासीले हातेमालो गर्दे अघि बढिदिनुहोला भन्न चाहन्छु ।
प्रतिकृयाका लागि इमेल : kunwar.tank15@gmail.com
मुक्तिका लागि साझा अभियान क्वारेन्टिनमा बसेकालाई खाना खुवाउँदै
जनप्रतिनिधिनै जाँदैनन् गाउँपालिका